. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: မော်ကျွန်း ၀ါးခယ်မ ခရီးစဉ်
ဒီတခေါက် ရန်ကုန်ပြန်ပြီး စိတ်ထဲ အကျေနပ်ဆုံး ဖြစ်မိတာကတော့ ကုသိုလ်နဲ့ Lotus အဖွဲ့တို့ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ မြို့ရွာအချို့ကို သွားခွင့် ရခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ခုမျှဝေချင်တဲ့ ခရီးစဉ်ကတော့ မော်ကျွန်း ၀ါးခယ်မ ခရီးစဉ်ပါ .. မော်ကျွန်း ၀ါးခယ်မ ကွမ်းခြံကုန် ခရီးစဉ်ကို ၈-၅-၂၀၁၂ ညနေမှ စတင်ပြီး ၁၁-၅-၂၀၁၂ မနက်မှာ အဆုံးသတ်ပါတယ် ..
ကျမတို့ အားလုံး ၈-၅-၂၀၁၂ ညနေ ၆နာရီထွက်တဲ့ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်နဲ့ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် .. မိုးခါးကတော့ မရောက်ဘူးသေးတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ကလေးတွေဆီ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရမှာမို့ အရမ်းကို တက်ကြွနေခဲ့ပါတယ် .. အဲဒီခရီးစဉ်ကို သွားရောက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာပြည်ဘက်က ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ သူတွေရဲ့ ခရီးဟာ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတယ် ပင်ပန်းမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်လဲသိပြီး အများကိုမျှဝေနိုင်ဖို့ ပြီးတော့ အထောက်ပံ့ခံ ကလေးတွေနဲ့ နယ်ဘက်ရဲ့ ကျောင်းအခြေအနေ လိုအပ်ချက်တွေကို သိရဖို့ ဖြစ်ပါတယ် .. ခု ခရီးစဉ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် နေရာတွေက ရန်ကုန်မြို့နဲ့ သိပ်မဝေးလှပါဘူး .. ဒါပေမယ့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါတယ် .. အလွယ်တကူသွားချင်တိုင်း အဆင်ပြေမှုတွေ မရှိဘူးဆိုတာ သိလာပါတယ် ..
ပထမဆုံး ရှပ်ပြေးယာဉ်ဟာ ၆နာရီမှာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းဘက်ကနေ စတင်ထွက်ခွာပါတယ် ..
စင်ယော်တွေ .. စက်လှေနောက်ကို လိုက်နေကြတယ် ..
အဲဒီနေ့က ရှပ်ပြေးပေါ်ရောက်ပြီး စထွက်တော့ တူတူသွားတဲ့ Lotus အဖွဲ့က စိုးပိုင်က ပေါင်မုန့်တုံးကြီး တခြမ်းခွဲပြီး လာပေးတယ် .. ကိုယ်ကလည်း ရတယ် မစားတော့ဘူး လို့ ဆိုတော့ သူက အစ်မကို ကျွေးတာမဟုတ်ဘူး ဇင်ယော်ကျွေးဖို့ ဆိုလို့ အော် .. အဟီး ဆိုပြီး သွားအဖြီးလိုက်နဲ့ ယူလိုက်ရတယ် .. :P ဇင်ယော်တွေကို အစာကျွေးပေမယ့် လေက တိုက် သူတို့ကလည်း မလိုက်နဲ့ ပေါင်မုန့်တုံးတွေ ဒီတိုင်းကျန်တယ် ..
မော်ကျွန်းမရောက်မှီ ကျုံကျိုက်သို့ အရောက်
မြင်နေရတာကတော့ ကျုံကျိုက်မြို့နယ်ခေါ်မလားပဲ .. အဲဒီဆိပ်ကမ်းမှာ ကမ်းဘက် ဆင်းသူက ဆင်း .. အပေါ်က ပုံကလို ပဲ့ထောင်လေးတွေပေါ် ခုန်ဆင်း ခုန်တက်ပြီး တခြားလိုရာအရပ်ကို ခရီးဆက်သူက ဆက်နဲ့ မနက် ၁နာရီ ၂နာရီက လှုပ်ရှားသက်ဝင်လို့ .. ကလေးတွေကို ၂လတခါ ကျောင်းစရိတ် သွားပို့ပေးတဲ့အခါ အနီးအနားက မြို့နယ်လေးတွေဆီ သွားဖို့ကို ခုလိုမျိုးပဲ ညကြီးမင်းကြီး လှုပ်ရှားကြရပါတယ် .. ၀မ်းစာရှာတဲ့လူတွေကရော .. သူတို့လည်းပဲ အခြားသူတွေအိပ်ချိန်မှာ မအိပ်နိုင်ပဲ ခုလိုမျိုး ငွေရှာကြရတယ် .. တချို့က ပဲ့ထောင်မောင်း တချို့က ကုန်ထမ်း .. ရှပ်ပြေးထွက်တော့ ဦးလေးကြီးတယောက် အိပ်ပျော်နေလို့ ဆိပ်ကမ်းကို ကျော်သွားတယ် .. သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဟုတ်လို့ .. ဟန်းဖုန်းမရှိလည်း ပြဿနာမဟုတ်ဘူး .. အော်လိုက် ဟစ်လိုက်ရင် ဖြစ်တယ် .. (ဟန်းဖုန်းလည်း အော်ရတာဆိုတော့ ထူးပါဘူး) တဆင့် တဆင့် အော်သွားလိုက်တော့ နောက်ဆုံး ပဲ့ထောင်တစီး ရှပ်ပြေးနား လာကပ်တယ် .. ရှပ်ပြေးက အရှိန်လျော့ပြီး အဲ့ဦးလေးကြီးလည်း ဘုတ်ခနဲ ခုန်ဆင်းသွားတာပါပဲ .. သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် ဟုတ်လို့ ..
ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်တွေက ဘိုကလေးသင်ကျောင်းဘက်တွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီသဘောင်္ကို ပြန်စီးဖို့အတွက် ည ၈နာရီလောက်ကို ပြန်ထွက်လာရတယ် .. တကယ်လို့ ဒီသဘောင်္က ၁၀နာရီ ၁၁နာရီလောက်မှ ကပ်တယ် .. ဒီသဘောင်္က မော်ကျွန်းကို ပြန်သွားတယ် .. မော်ကျွန်းကို ဆက်သွားပြီး မော်ကျွန်းက ကလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးသွားပေးတယ် .. ဒီမှာ အမြဲတမ်း လာစောင့်ရတယ် .. ရွာကနေ ၈နာရီလောက် ပြန်ထွက်လာပြီး ဒီနေရာမှာ စောင့်ရတယ် .. ဒီသဘောင်္က ၁၀နာရီ တခါတလေ ၁၁နာရီလောက် ကပ်တယ် .. အချိန်ကတော့ မမှန်ဘူး .. ဒီဆိပ်ကမ်းလေးကလည်း ၁၀နာရီဆို မီးပျက်တယ် .. မီးပျက်ပြီဆို မှောင်သွားရော .. ဒါပေမယ့် ပျော်တော့ ပျော်စရာကြီးပါ .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဒီလိုပဲ .. (Lotus အဖွဲ့မှ)
ဒါကလည်း မော်ကျွန်းမရောက်ခင် ထပ်ရပ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းတခုပါ ..
အဖွဲ့ဝင်များ တည်းခိုခဲ့သော ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ရှိရာ ဘုရားစေတီဝင်း
ကျုံကျိုက်နဲ့ မြင်းကကုန်း နှစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး မနက် ၃ ၄ နာရီလောက်မှာ မော်ကျွန်းကို ရောက်ပါတယ် .. အဲဒီအချိန်မှာ ထုံးစံအတိုင်း မီး မလာပါဘူး .. မြို့ခံအကိုတယောက်က အဖွဲ့ဝင်တွေ လာတိုင်း တည်းခိုနေကျ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး အဲဒီမှာ နားကြပါတယ် .. မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ စက်လှေတစီးကို ငှားပြီး ၀ါးခယ်မကို ဆက်လက် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ၀ါးခယ်မကို သွားတာကတော့ အဖွဲ့က ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပေးထားတဲ့ ညီမလေးတယောက်နဲ့ တွေ့ရဖို့ပါ .. သူကတော့ တက္ကသိုလ် တက်နေပါပြီ ..
မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ မြို့ခံအကိုတွေ ကျွေးတဲ့ အစားသောက်တွေ စားပြီး လှေဆိပ်ဆင်းပါတယ် ..ပြီးတော့ ၀ါးခယ်မကို ခရီးဆက်ကြပါတယ် ..
ကျွေးတာတွေ အများကြီးပဲ .. ဒါပေမယ့် အရင်လာတဲ့ ၂ပုံရိုက်ပြီး ကျန်တာတွေရိုက်ဖို့ စားပြီးမှ သတိရတယ် .. :P
၀ါးခယ်မကို မော်ကျွန်းကနေ စက်လှေစီးပြီးသွားရပါတယ် .. လမ်းတလျှောက်ရှုခင်းပါ .. ဦးလေးက မှာလိုက်သေးတယ် .. မီးငယ် အဲ့ကျရင် ရေထဲ ဆင်းမကူးနဲ့ မိကျောင်း ရှိတတ်တယ်တဲ့ .. ဒီကလည်း ဦးလေး စကားနားထောင်တယ် .. ရေထဲ ခြေထောက်တောင် ဆင်းမစိမ်ခဲ့ဘူး .. ကြောက်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး :D
မိကျောင်းကားတွေထဲက ဇာတ်ကွက်တွေကို သွားသတိရမိသေး ..
တကယ်တော့ သွားရတဲ့ ခရီးက သိပ်မဝေးပါဘူး .. ဒါပေမယ့် အချိန်မမှန်တာ (မှန်းမရတာ) သိပ်လွယ်လွယ်ကူကူ မရှိလှတာပါ ..
၀ါးခယ်မကိုရောက်ပြီး အလှူရှင်တဦးမှ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ညီမငယ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် .. တခြား ကျောင်းတွေကတော့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက် မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် ၂လ တခါ တာဝန်ယူပြီး ကလေးစရိတ်တွေကို သွားပို့ပေးရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြားက တာဝန်ယူပေးနေကြတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ခံစားခဲ့ပါသည်ပေါ့ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/30/2012 03:09:00 AM